Princess Fashion – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Ma rabtaa in aad si qurux badan ugu dheesho goobta qoob ka ciyaarka adigoo wata dhar kala duwan oo kala duwan oo aad noqoto xidigta daawadayaasha? Ma doonaysaa in aad duubto wakhtiga quruxda badan oo aad ku dhejiso My Twiiiitter si aad malaayiin suul kor ugu qaaddo? Hadda wax kasta oo aad rabto waa la gaari karaa!
Waxaad u labisan kartaa gabadha si kasta oo aad rabto! Oo ay ku jirto maqaarkeeda, dharka, asalka, iwm. Ka soo qaad in aad tahay sawir qaade, sii qaabkaaga muuqaal qumman, oo sawir farshaxan qurux badan ka qaado! Ciyaarteena, Waxaan kuu diyaarinay xulashooyin badan oo alaab ah si aad u labisato moodelkaaga! Madax ilaa cidhif, bacaha dahabka, waxaad isku qasi kartaa wax walba sidaad jeceshahay, waxa kale oo aad xidhan kartaa suudhadh kala duwan oo mawduucyo ah oo aanu kuu diyaarinay, sida sixiroolaha Akademiyada Sixirka, Boqorada Barafka iyo Princess Rose!
Ka dib dharka gabadhaada, waxaad sawir ka qaadi kartaa dharkeeda quruxda badan oo ku soo diri kartaa My Twiiiitter si aad u hesho Suul! Suulka kor waa la ururin karaa oo waxaad u isticmaali kartaa inaad ku iibsato qaar ka mid ah alaabta aad rabto!
Ka dooro dhowr suumood oo qurxoon goobta qoob ka ciyaarka, dabadeed dooro jaranjaro qoob ka ciyaar ah, taabo shaashadda, ha ka soo dhalaalayso xarunta qoob ka ciyaarka! Xasuusnoow in Suulka kor lagu kasbado qoob ka ciyaarka sidoo kale loo isticmaali karo in lagu gato alaab!
◾Qalab kasta oo timaha la isku daro, kumanaan dhar ah, iwm.
◾Mawduucyo kala duwan ayaa ku habboon riyooyinkaaga kala duwan!
◾Shaqada qoob ka ciyaarka, Shaqada Warbaahinta Bulshada!
◾HD tayada sawirka, saameyn gaar ah oo heer sare ah, iyo waayo-aragnimada ciyaaraha dhabta ah!
Soo deji ciyaarta hadda, oo isla markiiba noqday halyeyga!
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Fashion, Princess
← Solitaire Tripeaks Isbeddelka – Khiyaamo&Hack EspritBoom – Khiyaamo&Hack →